I-26 Tattoos ye-Elephant Tattoos I-Ideal For Men and Women-Tattoos Art Ideas
sonitattoo Julayi 7, 2016
Ukuthandwa kwezilwanyana ezisetyenziswe njengama-tattoos kuye kwanda ngaphezu kweminyaka. Bachaza iimpawu ezahlukahlukeneyo abantu abadibana nazo xa bephethe izilwanyana okanye bathande izilwanyana njengeendlovu, iingonyama nabanye abaninzi. Ezinye zezilwanyana ezithandayo zehlabathi kwizilwanyana zivela kwizilwanyana zasendle emahlathini.
Injongo ye #Indlovu yeendlovu ineentsingiselo ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo. Indlovu ingathetha uxolo, amandla namandla. Kufanekisela abo bafuna ukunxibelelana, ubulumko, inhlanhla kunye nempumelelo. Abanye abantu bacinga njengento yokuzala xa abanye bethatha njengokuzinikela, ukucingisisa, ukunyamezela nokuzingca.
Izindlovu zikwaxutyushwa kunye namafu kunye nokuchuma, ubuqaqawuli, ulonwabo, imemori, ukuzimisela nokungabonakali. Izitopu zeNdlovu zivela kwiimo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Nangona kunjalo, ngumsebenzi womntu onxibayo ukugqiba apho i-#tattoo ifakwe khona. Wonke umntu othanda le tattoo ukhetha oko kukuthetha kwaye unokukuxelela kuphela apho basebenzise itottoo endaweni abaye bayinayo. Indlovu imele ukuPhuma, iMemori, ?? Lonwabo, ?? Ubungqina, ?? Ukuzimisela, ukuVunjwa kunye novelwano.
1. Isandla esibalulekileyo Indlovu ye-elephant ink inkwenkwe yabafana
Abantu basebenzisa amathambo ukuze babonise ubuntu babo neemvakalelo zabo. AmaTattoos abe yintoni emele abantu ngaphandle kwesihlwele.
2. I-Bicep Elephant tattoo ingcinga yabantu
Kukho abantu abangenakuyeka ukufumana iimpawu rhoqo xa befumana isizathu saloo nto. Yintoni oyenzayo xa kuziwa ekubeni neloyiko elimangalisayo eliza kwenza ukuba ujike iintloko ezifana nale tattoo?
3. Ukwenziwa kwendlovu ye-elephant cool ye-elephant tattoo yamantombazana
4. Amahlamvu kunye nendlovu tattoo Ink ingcamango yamabhinqa amabhinqa
5. Thanda izindlovu inkinobho ye tattoo kuma-biceps amabhinqa
Kukho abaqulunqi abazodwa kwizithuba ezahlukeneyo. Into enhle ongayenza yona kukufumana umculi okhethekileyo kule tattoo.
6. I-Rose ne-Elephant bicep tattoo ingcamango yabesifazane
Kule minyaka, abantu baye baqala ukuya tattoo. Musa ukuya kubaculi abafunda. Kungaba yinto enyantyayo yokwenza ngenxa yokuba unobumba obungayi kubukeka lufana nale.
7. I-elephant elephant tattoo design for women
8. Iintyatyambo kunye neendlovu zetekisi kwimiba yamagxa
9. Compass kunye nemibala yeendlovu yombhobho inkinobho yabesifazane abasemva
Umsebenzi womculi nguye oya kukuqinisekisa ukuba umntu ulungile ekudwebeni amathambo.
10. Iimbali ezimnandi kunye neyendlovu yezotlo kubafazi abasemva
Akukho ndlela ongayifumana ngayo itottoo engunaphakade onokuyithiya. Kungcono ukuba wenze ingqondo yakho kuqala kwiloyilo oluyidingayo ngaphambi kokuya kule nto.
11. Icompass kunye ne-elephant biceps yomboniso we tattoo kumantombazana
12. Indlovu epholileyo umdwebo we tattoo emlenzeni
13. Indlovu yeefowuni ifake i-tattoo ink kwabesifazane
14. Indlovu enkulu umdwebo we tattoo kwisandla somfazi
Izilwanyana ezinamandla ezifana neendlovu zinentlonelo yabantu abavela e-Afrika nase-Indiya ngenxa yamandla amnandi abonisayo kunye nobukhulu bawo. Iinkokeli ezinkulu zahlanganiswa nale ndlovu kwaye ngexesha leemfazwe, izindlovu zaba zixhobo zokusebenza kwengqondo ezenza ukwesaba okukhulu kwiinkampu zeentshaba ngaphambi kokuba imfazwe iqale.
15. Intyatyambo kunye neendlovu itek ink inkcazo kumantombazana
EIndiya, banqulwa kwaye babonisa ububele nobuthixo. Xa kuziwa emathandweni endlovu, umbala weendlovu uthanda ukungafani nezinye izilwanyana apho kukho imibala eyahlukileyo. Ukusetyenziswa kwe tattoo kunokubonisa ukunyaniseka nokuphila ixesha elide. Ngoku uyazi ukuba kutheni abantu abaninzi behamba kule tatto design.
16. Imifanekiso yeendlovu kunye neendlovu kwisandla sabantu besifazane
Inyaniso indalo zeendlovu azizange zithandwa njengezinye izilwanyana. Ngaba uyazibuza ukuba ibhinqa lingayisebenzisa le tattoo? Ewe! Amadoda angaba ngabasebenzisi abathandwayo bemifanekiso yeendlovu kodwa abafazi basaya kuso.
17. I-tattoo epheleleyo ye-Chest elephant tattoo ingcinga yabantu
Ukuba umculi wakho ulungile, unako ukunciphisa indlovu ukuba ilungele nayiphi na inxalenye yomzimba kuquka iminwe okanye iinyawo.
18. Indlovu elula tattoo kumakhwenkwe engalo
Kufuneka uqonde ukuba abanye abantu abaya kulo tattoo, benza oko ngenxa yokudibanisa nabo ngokomoya, abanengqiqo okanye nangomntu siqu, bengalibali ukuba abanye baye kulo tattoo ngenxa yexabiso lobugcisa.
19. I-cute elephant tattoo design on female back
Kufuneka uqiniseke ukuba itekisi yendlovu oyisebenzisayo yinto oyifunayo ngokwenene ngenxa yokuba amaninzi amathambo ayigxina.
20. Indlovu eyindayo yesikhombiso sesinki kwi-shoulder
Unokwenza uphando oluthile ngaphambi kokuba ucinge ukuyisebenzisa. Kukho iindlela ezininzi zokushukumisa iifowuni zakho zeendlovu zibe zizodwa. Kuthatha ixesha kunye nesandla somculi onobuchule owaziyo ukuba udweba ntoni.
21. Inkomfa encinane yombhobho yomboniselo ingcamango yabesifazane abasemva
Kukho iiwebhusayithi ezininzi ongazisebenzisa xa ucinga ukuba ne tattoo yendlovu.
22. Umzobo weenkozo kunye neendlovu zokudibanisa amadoda
Xa u tyelela ezi website, kuya kuba lula ukukhetha uyilo oluyidingayo. Ubuhle bemiboniso yendlovu buyakwazi ukubonisa ngokucacileyo naluphi na uphawu oluhle.
23. Indlovu yeNdlovu eyimangalisayo yamadoda esifuba
Yintoni ohlala ulindele ukutshintsha indlela obukeka ngayo nge tattoo yakho yendlovu?
24. Indlovu ye-elephant ekhazimulayo ink ink inkcazelo ngentsimbi yentombazana
Yenza isitatimende sakho somnxeba ngale tattoo uze uncumo xa abantu bejonge kuyo.
25. I-Red splash kunye ne-elephant tattoo ingcamango yengalo
26. Indlovu umdwebo we tattoo owenzelwe abafazi
Cofa apha ukuze uninzi lweeNdlovu zoTyhila
izigulaneiifatyambo zeentyatyambotatna tattootatto tattoosukutshiza amathambotattoo yamehlotatto flower flowertattoosiimpawu zezodiac zempawutattoos kumantombazanadesign mehndii-cherry ityatyambotattoozomculo tattoosi-tattoosiipattoosi tattoozinyoniI-Ankle Tattoostattoostattongesandlatattoos zenyangatattoos zelangaIintliziyo zeTattoosicompass tattooizithunywa zezulutattoo engapheliyoiidotitattooutywala tattootattoosizifuba zesifubasibinitattoos kubantucute tattoosiifoto eziphakamileyotattoosbathanda i tattoosiifotto zentamoTattoos zeJometriIintyatyambo zeTattooihoi fish tattooowona mhlobo womhlobotattoo yedayimanitattoos ezinyawongombonozengalo zengalotattoos zohlangaIndlovu yeendlovu